नेपालको अमिताभ बच्चनसँग काम गर्न पाउँदा खुशी भएकी दीपाश्री - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १२:१६
निर्देशक दीपाश्री निरौलाले सिनेमा‘शत्रु गते’मा कलाकार हरिवंशको जोडी भएर भएर काम गर्दै छिन् । जानकारी अनुसार यस सिनेमाका मुख्य अभिनेता र अभिनेत्री नै हरिवंश र दीपाश्री हुनेछन् । सिनेमाकी अभिनेत्री भएर नै दीपाले कलाकारिताको शुरुवात गरेकी थिईन् । बीचमा आएर उनी हाँस्य कलाकारको रुपमा स्थापित भईन् । हाँस्य कलाकारको परिचय बनाईसके पछि उनी रेकर्ड ब्रेकर निर्देशकको रुपमा चर्चित भईन् । उनले पहिलो पटक निर्देशन गरेको सिनेमा ‘छक्का पञ्जा’ले मल्टिप्लेक्समा सय दिनमात्रै मनाएन १७ करोड कमाउँदै नेपाली सिनेमाको ईतिहासमै धेरै कारोबार गर्ने सिनेमा बन्यो । तर सिनेमा निर्देशनकोे क्रममा दीपाले विभिन्न किसिमका आलोचनाहरु बेहोरिन् । ‘छक्का पञ्जा’भन्दापनि ‘छक्का पञ्जा २’ रिलिज भएपछि दीपाको खुट्टा तान्नेहरुको ओईरो लाग्यो । यसैबीच उनले सिनेमामा अभिनेत्रीको रुपमा कामगर्दा धेरैले निर्देशनमा गाली खाएर अभिनेत्री बनेको अनुमान पनि लगाउन भ्याएका छन् ।
तर यस बारेमा बोल्दै दीपाले भनेकी छिन्, ‘खासमा म कलाकार हो । अरु काम गरे पनि त्यो कलाकारिताको किरो कता–कता छटपटिरहेको हुन्छ । यहिकारण राम्रो ब्यानरको प्रस्ताव आउँदा गर्न मन लाग्यो । फेरि ‘शत्रु गते’को ब्यानरको त कुरै छोडौँ । हरि दाई र मदनदाईको पथमा हिड्न चाहने मान्छे हामी । पहिलो पटक मदनदाई र हरि दाईको टेलिसियल ‘१५ गते’मा‘सय थरि बाजा एउटै ताल’मा कोरस नाचेको थिएँ । त्यहि मान्छे आज हरि दाईसँगै जोडी बनेर कामगर्न पाउँदा म जस्तो खुशी पनि कोही छैन । अनि म जस्तो भाग्यमानी पनि कोही छैन होला । खासमा एउटा कलाकारको किरो छटपटिएर ‘शत्रु गते’मा आईपुगेको छ ।
अनि निर्देशनको कुरा गर्नुपर्दा मैले वर्षमा एउटा सिनेमा मात्रै निर्देशन गर्ने हो । राम्रो ब्यानरबाट प्रस्ताव आउँदा गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो अनि अभिनयमा आएँ ।’
तर अब पूर्ण रुपमा नायिकाकै रुपमा सिनेमामा फर्किने कुरामा भने दीपाको तर्क यस्तो आयो, ‘अहिलेका सिनेमाको कथामा नायक र नायिका हुन्छ । त्यस कारण कथाको नायिका भएर काम गरेँ भने त राम्रो भईहाल्यो । तर पाखा पखेरामा नाच्ने खालको हिरोईन भने म अवश्य पनि हुन सक्दिन । त्यो त मैले करिअरको शुरुवातमा गरिहालेँ । तर सिनेमाको मुख्यपात्रको रुपमा प्रस्ताव आयो भने गर्छु । अहिले चाहि सिनेमाको हिरो हिरोईन भईसके पछि नाच्नै पर्ने, नुहाउनै पर्ने भन्ने छैन । त्यस कारण त्यो किसिमको हिरोईन चाहि म हुन सक्छु ।’
‘छक्का पञ्जा २’ बाट खेप्नु परेको आलोचना बारे कुरा गर्दै दीपाश्रीले भनिन, ‘हिड्ने मान्छेलाई त लाग्ने हो ठेस । तर बन्द कोठाभित्र बसेको मान्छेलाई पनि आलोचना गर्छु भनेर कसैले साेंच बनायो भने आलोचना गरेरै छोड्छ । सिनेमाको निर्देशनका क्रममा केही कमजोरीहरु भए होलान् म स्वीकार्छु पनि । ‘छक्का पञ्जा’कै कुरा गर्ने हो भने पनि हलमा एकदमै राम्रो भनिदिनु भयो । तर युट्युबमा आएपछि भने सबैले आलोचना गर्नु भयो । अब त्यसलाई कसरी मुल्याकंन गर्ने । त्यो आफ्नै पाटो छ । ‘छक्का पञ्जा २’ राम्रो भईरहेको छ । बालक देखि बृद्धहरु आएर स्याबासी दिनु भएको छ । फस्ट हाफमा भने हामीले सरलीकरणमा ध्यान दिएका रहेछौ । तर सेकेण्ड हाफमा भने पात्रहरुको आगमन धेरै भएका कारण सरलीकरण नभएको दोष मलाई लागेको भए म सहजै स्वीकार गर्छु । मलाई पनि पात्र धेरै भएर मैले बुझाउन नसकेको हो की ! भन्ने लाग्यो ।
त्यस कारण निर्देशनमा गाली खाएर म हिरोईन बन्न आएको हैन । कलाकारिता नै यस्तो पाटो हो जति बेला पनि गाली खान सकिन्छ । त्यस कारण गाली मै मज्जा छ । यो क्षेत्रमा लागिसके पछि कसैले पनि शतप्रतिशत राम्रो भन्दैन । तर ढुकेरै दीपक दीपालाई गाली गर्छु भनेर बसेका पनि केही देखियो यसपाली । तर हामीलाई यसमै छ मज्जा ।’
दीपकराज गिरीसँग ‘तितो सत्य’मा जोडी भएर काम गरेकी दीपा यतिबेला सिनेमा ‘शत्रु गते’मा हरिवंशको जोडी भएर काम गर्दैछिन् । दीपक र हरिवंशमध्ये कोसँग काम गर्दा सहज ? भन्ने प्रश्नमा यी दुईको त तुलना नै छैन भन्दै उनले भनिन्, ‘हरिदाईसँग पनि मजा आईराको छ । दीपकसँग त मैले तँ तँ र म म भनेर काम गर्दै आएको । अनि हरिदाईसँग पनि सहज होस् भन्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु । तर हामी क्यामेराको अगाडि आयौँ भने चरित्रमा घुसीहाल्छौँ ।
नेपालको बरिष्ठ कलाकार हरिदाईसँग जोडी भएर काम गर्न पाईराको छु । जन्म दिएकोमा भगवानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हरिदाई र मदन दाई भनेको त नेपालको अमिताभ बच्चन हो । जसरी बलिवुडमा अमिताभ बच्चनसँग काम गर्न मान्छेहरु लालायित हुन्छन् नी त्यसरी नै नेपालमा पनि हरि दाई र मदन दाईसँग काम गर्न धेरैलाई मन लाग्छ । तर त्यो मौका भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ । त्यो भाग्यमानीमा म परेको छु ।’